Fisolokiana iraisam-pirenena Any Comores sy Arabie Saoudite no fanondranana olona
Voalaza tamin’ny famotorana fa vehivavy hiasa any Arabie Saoudite ny vehivavy roa ary any Comores no haterina handray ny sidina hihazo ny toerana.
Manararaotra ny fahantrana sy ny tsy fananan’asa ireo mpisoloky amin’ny tsenan’ny asa any ivelany. Araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirena. Vehivavy iray, 32 taona, no nosamborin’ny polisy avy ao amin’ny « services des enquêtes spécialisées » tany amin’ny seranan-tsambon’i Mahajanga ny 15 mey teo. Ny fihetsika hafahafa teny an-tseranana eny, no tsikaritry ny polisy ka niatombohan’ny fanadihadihana. Fantatra tamin’izany ary fa hanatitra vehivavy Malagasy roa ho any amin’ny Nosy Comores ity voasambotra ity. Nandritra ny famotorana ihany koa no nahafantarana fa efa tambajotra voarindra no manao ity fanondranan’olona ity: hafarana avy any amin’ny faritra, hiakatra eto Antananarivo; misy mampiantrano eto Antananarivo izy ireo mandritra ny fikarakarana ny taratasiny ary hakana vola 1.200.000 Ariary isan’olona. Haterina any Mahajanga indray avy eo hihazo an’i Nosy Comores. Any efa misy olona hafa mandray sy mampiampita azy ireo any amin’ny toerana halehany. Natolotra ny Fitsarana omaly ity vehivavy voasambotra ity.